Vonon-kiaro ny Lalampanorenana ary miantso ny mpifidy handray anjara - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Razafindramanitra il y a 5 jours
www.lakroa.mg. Olona manao samboady no nosamborina teny Analakely. Tsy nanana antra. Izay no isan’ny sary mifantoka antsaina raha vao miresaka aminao. Ankehitriny mbola manao politika ianao tsy leo ve ianao Guy Maxime Ralaiseheno ?
GMHR. Tsiahiviko fohy ny nahatonga izany. Fanoherana ny fanitsakitsahana Lalampanorenana ny nandresy lahatra ahy ary nitarika an’ireo ben’ny tanana namana. Faharesen-dahatra fa manana ny marina, tsy fanekena ny fanitsakitsahana Lalampanorenana. Ireo no nahatonga ahy hihetsika. Fiarovana ny Lalampanorenana no nisedrako ny fonja. Tsy hanenenako izany. Tsy leo ve ? Tsy mahazo mijanona manoloana ny fanitsakitsahana Lalampanorenana izany ary ny traikefa tsy azo tehirizina anaty vata.
www.lakroa.mg. Raha faharoa anaty lisitra ve ianao afaka hiaro Lalampanorenana izany ?
GMHR Diso izany fijery izany. Tsy faharoa anaty lisitra ny tenako. Mila hazava amin’ny mpifidy ny zava-misy. Ohatra raisiko raha mahazo 60% ny lisitra misy ahy, azo tanterahina tsara izany, dia miara-lany izahay roa ao anaty lisitra. (TTF. Mila manazava tsara ny mahakasika ny fifidianana ity tokoa ny CENI).
www.lakroa.mg.Tena manjavozavo antsaina tokoa ity resaka lisitra ity fa mila entanina ny CENI hanazava azy. Milaza ianao fa ilaina zaraina ny traikefanao fa tsy tehirizina anaty vata. Mba hazavao indray hoe ?
GMHR Niainga tany ifotony ny fandraisako anjara eo amin’ny sehatra politika. Filoham-pokontany, lefitry ny lehiben’ny fokontany Ifarihy, ben’ny tanàna lefitra, ben’ny tanàna indroa ary voafidy ho filohan’ny ben’ny tanàna manerana an’i Madagasikara, mpanolotsaim-paritra sady mpitondra tenin’ny Faritra Analamanga, mpikambana tao amin’ny Kongresin’ny Tetezamita… Misy traikefa azo tamin’izany dingana rehetra izany indrindra ny resaka fitsinjaram-pahefana. Tsy afaka ny hitahiry an’izany anaty vata. Izay no mahatonga ahy hiaraka amin’ny kandida tanora ary vehivavy.
www.lakroa.mg. Raha izay traikefa izay inona no laharam-pahamehana atolotrareo ?
GMHR Ny voalohany amin’izany dia ny fandrafetanay tolo-dalana mikasika ny Tetibolam-panjakana. Ho anay dia tsy maintsy miainga avy aty ifotony ny fandrafetana izany tetibolam-panjakana izany. Jereo tsara anie fa ny 3%-n’ny tetibolam-panjakana ihany no miantefa amin’ny Vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Voatery miandry ny sitrapon’ny mpitondra izany ny any ifotony. Rehefa tsy naman’ny mpitondra foibe izany dia tavela. Ary na miara-dalana amin’ny mpitondra aza dia mbola tsy azo antoka hahazo ara-potoana ny vola ilaina ny mpitantana kaominina. Kely no voatokana ho an’ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana kanefa any ambony any dia vola amina miliara no verivery fotsiny izay tombanana ho 2000 lavitrisa na miliara ariary isan-taona, very amin’ny endriny maro tsy mitondra fampandrosoana.
Ankoatra io Tetibola miainga aty ifotony io dia eo ny resaka fananan-tany. Manana traikefa momba io izahay ary efa vonona sy masaka ny tolo-kevitray.
Ny resaka fitsinjaram-pahefana moa dia efa niainako nandritra ny mandat intelo nahaben’ny tanana ahy ny lesoka ka haiko tsara fa mitaky lalàna ny famahana olana, lalàna efa masaka aty aminay satria vokatra azo tamin’ny traikefa.
www.lakroa.mg. Na tsara aza ny hevitrareo tsy afaka mankaiza ny depiote tsy miankina fa voatery mifampiraharaha amin’ny depiote be an’isa. Ahoana ny amin’izay ?
GMHR Tsy miankina tokoa izahay. Ary raisinay ho hery izany. Ny hevitra atolotray dia azonay antoka fa afahanay mandresy lahatra ireo depiote hira-dalana aminay ary heverinay fa haharesy lahatra ny mpifidy izany rehefa tonga ny fotoana fampielezan-kevitra. FA marihiko tsara fa ankoatra ny fifidianana lalàna dia mavesa-danja ny fanaraha-maso ny asan’ny mpanatanteraka.
www.lakroa.mg. Hazavao bebe kokoa ?
GMHR Be loatra ny vola verivery fotsiny noho ny fitantanana goragora na tia tena ataon’ny mpanatanteraka. Jereo ireo subventioon zaraina etsy sy eroa, jereo ireo solika be lanin’ny mpitantana foibe isaky ny minisitera na any ankafa. Mila harahaina maso ireny rehetra ireny ary faranana. Manana adidy mavesatra amin’izany ny solombavam-bahoaka.
www.lakroa.mg. Ny hita hatreto dia tampenana malety ny mason’ny depiote ary voafatotr’izany avy eo. Ahoana hoy ianareo ?
GMHR Ny ady amin’ny kolikoly dia efa miroso. Efa nibaribary izany fomba ratsy izany. Tsy sarotra intsony ny miady amin’izany satria efa fantatra ny fomba ratsy. Ny tantaram-piainanay mpiray lisitra dia efa porofo fa tsy manaiky malety izany izahay na teo amin’ny sehatra politika na eo amin’ny sehatra mahampandraharaha anay. Efa toky mavesa-danja izany.
www.lakroa.mg. Malaza fa leo politika ny vahoaka. Ny fahitanareo izany ary ady hamehezana ny dinika ?
GMHR Ho ahy dia tsotra ny hafatro. Manana zo hifidy ny olom-pirenena. Tsy hoe tsy nifidy ianao dia tafakatra eo amin’ny fitondrana ilay tsara noheverinao. Samy mikatsaka ny tsara ny olona tsirairay, mahafaty ny fialana andraikitra ary fialana andraikitra ny tsy fifidianana. Mila mazava ao antsain’ny olompirenena izany. Adidy ny manaitra ny mpifidy ary izany no ataonay mandritra izao fotoana mialohan’ny fotoan’ny fampielezan-kevitra izao. Jereo ny kandida isanisany safidio ary miresaha amin’ny kandida fa aza mitazana fotsiny. Ho fara-teny dia hoy izahay hoe “Fantaro izay tena vonona hiaro ny tombontsoan’ny daholobe”. Fantaro ohatra fa ny lisitra misy ahy dia Indépendant Ratsimba Christian Andomiray. Ny voalohany anaty lisitra dia Ratsimba Christian Ando Mireille Sylvia, ny mpisolo toerana dia Andrianasolo Rolland Michel Olivier, izaho Ralaiseheno Hasinjaka Guy Maxime no faharoa anaty lisitra ary ny mpisolo toerana dia Ravaonirina Holisoa Hanitra Tatamo.
Guy Maxime Ralaiseheno : Vonon-kiaro ny Lalampanorenana ary miantso ny mpifidy handray anjara - il y a 5 jours
Fy Andrianarison tao Antanetibe Atsinanana : Nanolotra fitaovana hanamboarana ny paompin-drano - il y a 25 jours